Cudurka Corona ma yahay sida loo buunbuuninayo ama looga cabsanayo? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Cudurka Corona ma yahay sida loo buunbuuninayo ama looga cabsanayo?
Cudurka Corona ma yahay sida loo buunbuuninayo ama looga cabsanayo?
Cudurka Corona ma yahay sida loo buunbuuninayo ama looga cabsanayo? Jawaabtu waa: Maya, sabbabtuna waa arrimaha soo socda:
✪ 100-kii qof oo ku dhaco cudurkaan waxaa celcelis u dhintay ugu badnaan 3 qof inta hadda la xaqiijiyay, taasoo macnaheedu yahay in dhimashadiisu ay aad uga yar tahay markii loo fiiriyo xanuuno kale oo dunida soo maray sida hargabka doofaarka, hergabka shimbiraha, ebola iyo kuwa kaloo badan sida HIV-ga, TB-da, Shuban biyoodka, Malariyada.
✪ Dad badan waxay aaminsan yihiin in xanuunkaan aan laga bogsan, waana fikrad qaldan oo kumanaan ayaa ka caafimaaday.
✪ Dadka badanaa cudurkaan u dhintay boqolkiiba 60% waa dad da’ ah ama xanuunsan ama difaacoodu yar yahay ama aan is la tacaalin.
✪ Waxaa jira dad tira badan oo waqti dambe la ogaaday inuu xanuunka horay u soo maray, sheegayne inaysanba dareemin wax aan hargab ahayn.
✪ Waxay cilmibaarayaashu aaminsan yihiin in xanuunkaan si baahan ugu faafay dunida, wadan walbane uu gaaray, laakiin ay dawladuhu qarinayaan iyagoo u yeelayo arrimo la xiriira dhaqaalaha iyo in argagax aan lagu abuurin bulshada.
✪ Maadaama akhbaarta badankeed ay dadka ka qaataan baraha bulshada, taasi waxay keentay in been laga faafiyay cudurkaan, dadkane ku abuurtay baqdin iyo cabsi.
Fadlan #FAAFI fariintaan, lana soco taxanaha cudurkaan ku saabsan,
Degdeg Qarax ka dhacey muqdisho iyo masuul ku dhaawacmey